Koonfur Afrika: Boolis loo heysto dil - BBC News Somali
Koonfur Afrika: Boolis loo heysto dil
Image caption Boolis kula dagaalamayo dibadbaxayaal meel u dhaw goob laga qodo macdanta
Afar askari oo ka tirsan booliska waddanka Koonfur Afrika ayaa loo xiray toogashadii ay Khamiistii mudaharaadayaasha ku dhitneen gudaha waddankaasi.
Tshepo Babuseng, oo ah 28 jir, qeybna ka ahaa dibadbax ku saabsan guriyeen oo ka dhacay banaanka Johannesburg, ayaa dhimashadiisa waxaa lagu eedeeyay nin boolis ah.
Warar hordhac ah ayaa waxa ay sheegayaan in dad badan ay ku soo xoomeen koox boolis ah kuwaasi oo wadada ka qaadayay dhagxaan iyo walxo kale oo lagu gooyay, hal boolis ah ayaa kaddib lagu eedeeyay in uu xabado furay.
Hal sarkaal ayaa waxa uu wajahayaa eedo ah in uu dil geystay, halka kuwa kalana lagu eedeeyay in cadaaladda ay ku xad gudbeen.
Afhayeenka booliska magaalada Gaurteng, Neville Malila, ayaa sheegay in askarta oo ay da’doodu u dhaxeyso 33-49 sano, ay ka soo hor muuqan doonaan maxkamada.
Askartan ayaa laga joojiyay shaqada iyadoo laga war sugayo sida uu kiiskooda ku dhamaado.
Booliska Koonfur Afrika ayaa si joogta ah waxaa loogu eedeeyaa naxariis daro iyo in ay si khaldan u isticmaalaan hababka lagu maareeyo isu soo baxyada iyagoo isticmaalo rasaas nool.
2012-kii, booliska ayaa waxa ay toogasho ku dileen 34 macdan qodayaal ah oo ku sugnaa Marikana – taasoo noqotay dhacdadii ugu dhimashada badneyd oo ay fuliyaan ciidammada ammaanka tan iyo intii laga guulaystay midab kala soocii 1994-kii.
Sanadkii tagay, waxaa muuqaal laga soo duubay askar gaarigii ay wateen gadaal kaga xiraya nin ka hor inta aanay gaariga dhaqaajin kaddibna ku jiiday wadada. Ninkaas ayaa markii dambe meydkiisa la helay.